परदेशले सुनसान गाउँघर::समायोजन खबर
परदेशले सुनसान गाउँघर
तस्विरमा देखिएको गाउँ मुलडाँडा गैरी हो । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३ नुनथलाको साविक वडा नं. ८ मा पर्ने मुलडाँडा गैरी गाउँ उदेक लाग्दो छ । कारण त्यहाँका सवै युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा विदेशीएका छन् । गाउँघरमा बुढाबुढी, बुहारीहरु र केटाकेटीहरु मात्रै छन् । गाउँलाई हेर्दा नक्सा कोरे झै देखिन्छ, जुन चलयमान छैन । विहान वेलुका अलवा गाउँ पुरै सुनसान हुन्छ । मान्छे नभएजस्तो ।
४५ घरधुरी रहेको मुलडाँडा गैरीमा विहान ९ वजेसम्म स्कुले केटाकेटी घरमा हुने र साँझ फर्केर आएपछि त्यही केटाकेटीले गर्दा गाउँमा मान्छे भएको हल्का महशुष हुन्छ । बैदेशिक रोजगारीमा युवा तथा उमेर भएका वयष्कहरु समेत कतार, मलेसिया, दुबई, बहराईन लगायतका मुलुकमा छन् । उनीहरु रातादिन कमाई गर्छन । दुःखले होस त सुखले । यता परिवारमा आज हो कि भोली भनेर कुरीरहेका आमाबुुवा सकि नसकि काम गरिहरेका छन् । श्रीमानको बाटो हेर्दै श्रीमतीहरु आफ्नै जीवन चलाउनमा व्यस्त छन् । वालवालिका स्कुल र साथी–साथीबिच खेल्ने क्रममा बुबाको खबर, परिचय साटासाट गर्छन् । कतीले त आफ्नो बुबाको अनुहारसम्म देख्न पाएका छैनन् । जसलाई बुबाले आमाको पेटमै छोडेर विदेश गए ।
मुलडाँडा गैरीका २२ घरका युवाहरु अहिले पनि विभिन्न मुलुकमा काम गरिरहेका छन् । बाँकी घरका कोही छुट्टीमा घर आएका छन् । गाउँबाट विदेश नजाने कोही छैन । एकै घरबाट तीनजना तथा दुई जनासम्म विदेश गएका छन् । आफ्नो दुईजना छोराहरु मलेसियामा रहेको र एकजना सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको एकजना बुढी आमाले बताईन् । हप्ता दिन अघिमात्र उनको एकजना छोरा मलेसिया गएका छन् । घरमा बसेर के गर्ने, गर्दा खेती किसानी हो, ज्याला मजदुरी हो । त्यसको पनि बजार छैन । विकल्प त विदेश नै रह्यो । एकजना स्थानीय भन्छन्, ‘विदेश गयो कमाएर ल्यायो । जीवन गुजारा ग-र्यो ।’
अहिले त्यस गाउँमा युवाहरु पाउन मुस्किल हुन्छ । सामाजिक काम तथा मर्दापर्दा गाउँघरमा बुढाबुढी र केटीकेटी मात्रै पाईन्छन् । उनीहरुले गाँउघर धानिरहेका छन् । युवाहरु पराई मुलुकमा पसिना बगाई रहेका छन् । विदा लिएर गाउँघरमा जाँदा मनै नअडिएको एकजना युवाले सुनाए । गाउँघर गयो, त्यही बुढाबुढी बुबाआमा, केटाकेटी र बुहारीहरु छन् । आफ्नो दामलका मान्छे छैन । अनि कसरी मन अडिन्छ । उनले प्रश्न गरे । ‘यस्तै हो भने गाउँमा आपत्ती आइपर्दा ठूलो क्षति हुनसक्छ । यसतर्फ चाँडोभन्दा चाँडो सवैको ध्यान जानुपर्छ ।’ कतीपय आमाहरुसँग छोराहरु विदेशमा रहेको कुरा गर्दा मात्रै उहाँहरुको आँखा रसाउन थाल्छ । किन कि कति आमालाई थाहा छ । छोराछोरीसँग भेट हुन्छ कि हुन्न यो जुनीमा ।
मुलडाँडा गैरी गाँउ त एक प्रतिनिधि गाउँ मात्रै हो । गैरीमा जस्तै नुनथलाभरीका कुल ११८ घरधुरीमा यस्तै समस्या छ । मान्छे मर्दा मलामीसम्म पाउन हम्मेहम्मे पर्छ । मुलडाँडा गैरी र सिङ्गो नुनथलामा जस्तोे समस्या अहिले जिल्लाभरी र नेपालभरी रहेको छ । हाल नुनथलामा ५१ वर्ष माथिका १२१ बृद्धबृद्धा, १–१५ वर्षसम्मका १७६ महिला÷पुरुष र १६–५० वर्षका ११३ जना पुरुष गाउँमा छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सालमा नुनथलाबाट मलेसियामा ३४, कतारमा २८, दुबईमा २१, साउदीमा २५, कुवेतमा ५, बहराइनमा ७ र युरोप तथा अन्य मुलुकमा ७ जनागरी १३१ जना विदेश गएका थिए । जसमा ४ जना महिला र १२७ जना पुरुष छन् । ५ करोड ५८ लाख ३७ हजार नुनथलामा रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
भित्रिएको रेमिट्यान्स सवैभन्दा वढी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको तथ्याङक छ । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स मध्ये घर खर्चमा ८४ लाख २६ हजार, जग्गा खरीद तथा घर निर्माणमा १ करोड ९८ लाख ५ हजार, शिक्षा स्वास्थ्यमा १ करोड ३१ लाख ६२ हजार, व्यवसायमा १ लाख ६० हजार, ऋण तिर्नमा ८६ लाख ५४ हजार र बचतमा ५६ लाख ३० हजार भएको सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजनाले बताएको छ । बिदेश गएका १३१ जनाको घर–घरमा पुगेर दुई पक्षबिच छलफल गरे प्रतिव्यक्तिको आय ३५ हजार ५ सयको आधारमा उक्त रेमिट्यान्स भित्रिएको र खर्च भएको सामीसँग तथ्याङ्क छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि केही मात्रामा मात्रै तथ्याङ्क तलमाथि हुने जनाइएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाभित्र मात्रै गत आवमा ९३ करोड ५४ लाख ४२ हजार रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यस्तै, गत आवमै सवैभन्दा बढी बुईपाबाट ३१५ जना र पाथेकाबाट २९९ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । वेलैमा यसप्रती स्थानीय सरकारहरु चनाखो हुन आवश्यक छ ।
२०७६ बैशाख २२ गते अपरान्ह ३ : १३ मा प्रकाशित
हिमपातले कतै मनोरञ्जन कतै सास्ती,परीक्षासमेत स्थगन
चिसो झन बढ्यो, उपत्यका र पहाडमा वर्षा, उच्च पहाड र हिमालमा हिमपात
नारायणगढ-मुग्लिन सडक आजदेखी किन भयो बन्द ?
समायोजन खबर डोल्पा, केहीदिन देखि हिमाली जिल्ला लगायत उच्च...
पानीमा रुज्दै गौरिका सिंहले यसरी साटिन खुशी
काठमाण्डौ – १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)...
अक्षयकोषका लागि करोड संकलन अभियान
समायोजन खबर सोलुखुम्बु, शैक्षिक सुधारको लक्ष्य राखेर सोलुखुम्बुको एक...
भीआईपी सिटमा प्रचण्डका छोरी ज्वाई, शक्तिको दुरुपयोग भन्दै आलोचना
समायोजन खबर काठमाडौं, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दोस्रो...
पचास हजार घुससहित दुई पक्राउ
समायोजन खबर सर्लाही, नेपाल–भारत सीमा नजिकै रहेको ब्रम्हपुरी गाउँपालिका...
समायोजन खबर काठमाण्डौ, काठमाण्डौ उपत्यकासहित पहाडी क्षेत्रका केही ठाउँमा...
समायोजन खबर नारायणगढ, मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दुई सातासम्म दिउँसो...
काठमाण्डौ आसपास भूकम्पको धक्का महसुस
समायोजन खबर काठमाडौं, काठमाडौंलगायत आसपासको जिल्लामा बिहीबार साँझ भूकम्पको...